कर्मचारीको पेन्सन घट्ने !
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव संसदल् स्वीकृत गरेमा आगामी दिनमा कर्मचारीहरुको पेन्सन घट्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघीय निजामति ऐनमार्फत अर्थले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा राय मागेकोमा अर्थले पेन्सन घटाउने प्रताव गरेको छ ।
तलब बृद्धि हुँदा बढाएको रकमको हाल ६५ प्रतिशत पेन्सनवालाको पनि बढ्छ । त्यसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५ प्रतशित बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशतमा झार्न राय दिएको छ । आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यस अर्थ मन्त्रालयको राय लागू हुने सम्भावना छ । आजको दृष्टि साप्ताहिकबाट ।
ध्यान गर्दा यस्तो अचम्मको फाइदा !
ध्यान गरेरै मनमा हुने अनेक अशान्तिबाट टाढा रहन सकिन्छ । ध्यान गर्दा मन एकाग्र हुने भएकाले बाहिरी कामबाट हुने भय, डर, चिन्तालाई हटाउन सकिन्छ । त्यस्तै आफूमा धैर्यताको विकास गर्न ध्यान गर्न आवश्यक छ ।
स्मरण शक्ति बढाउन यसो गर्नुस्...
-निद्राका कारण हाम्रो स्मरण शक्ति क्षीण भइरहेको हुन्छ । यसर्थ, दिमागलाई सदा चनाखो राख्न पर्याप्त निद्रा आवश्यक छ ।